Listings in စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)
Farmers Choice Tractors Co.,Ltd.
အမှတ် ၈၉၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်(၈)လမ်းနှင့် ကျွဲဆည်ကန်(၉)လမ်းကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်မီးပွိုင့်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-2001078 , 09-402512671
09-2001078, 09-402512671, 09-91000109, 09-962001078, 09-977908090
Farmtrac [Yangon Tractor Co.,Ltd.]
အမှတ် အဆောင်-၂၊ အခန်း ၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်(၃)လမ်း ထိပ်၊ ကျွဲဆည်ကန်ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
၈၂လမ်း၊ ၂၆လမ်း နှင့် ၂ရလမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-950682222 , 09-445932977
အမှတ် (ဂျီ-၅)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊, ,
အမှတ် ၂၉၃၊ ၂၈လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊, ,
in စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ, စက်ယန္တရားကြီးများ, စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း
အခန်း ၅/အဆောင်-၂၇၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားပစ္စည်းဈေး၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ပွဲရုံနှစ်ထပ်တိုက်၊, ,
09-765142302 , 02-4065041
John Deere [Capital Automotive Ltd.]
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402545669 , 09-970274594
Ko Nay Mandalay
၄၉လမ်း နှင့် ၅ဝလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းမြောက်ဘက်၊, ,
09-402628682 , 09-451002273
အမှတ် အဆောင်-၈၊ အခန်း ၅၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ဆန်ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-262499577 , 09-798660315
09-262499577, 09-798660315, 09-5275241
in စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပိုက်နှင့်ရေစုပ်စက် အပိုပစ္စည်းများ, ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
လမ်းသွယ်(၈)၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်းနှင့် ဝေသာလီလမ်းကြား၊, ,
09-43083799 , 09-787588789
Myan Shwe Pyi Co., Ltd.
အမှတ် နန-၃၃(၁-က)၊ ၅၁လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ၁၃၂(မင်္ဂလာလမ်းထောင့်)၊, ,
02-5152346 , 02-5152345